ကီးဘုတ်မှာမကြည့်ဖို့ကြိုးစားပါ။ ဒါဟာပထမဦးဆုံးမှာခက်ခဲပေလိမ့်မည်, ဒါပေမယ့်သင်ကလေ့ကျင့်ခန်းမှတဆင့်တိုးတက်မှုအဖြစ်, သင်က ပို. လွယ်နှင့်သင့်လက်ချောင်းကိုသင်သတိရှိရှိသောသော့နှင့်ဆက်စပ်သောလက်ညှိုးကိုဆုံးဖြတ်ခြင်းမပါဘဲပြောင်းရွှေ့ဖို့စတင်မည်တွေ့လိမ့်မည်။
သင်ရိုက်ထည့်ဖို့သင်ယူအဖြစ်အသုံးပြုဖို့သောလက်ညှိုးကိုကြည့်ရှုခြင်းငှါကီးဘုတ်အထက်ကြည့်ပါ။ အမှားတစ်ခုလုပ်ဖို့ကြောက်လန့်ခြင်းမရှိကြနှင့် - သင်ပြုလျှင်, ထို program သင်အသုံးပြုမှန်ကန်သောသော့ချက်ကိုပြသပါလိမ့်မယ်။ key ကိုမှန်သည်ဆိုပါကမှားသည်မှန်လျှင်, အစိမ်း, အညွှန်ပြနေတယ် - ထို့နောက်အနီရောင်။
အချိန်ဇယားကိုထူထေ​​ာင်ခဲ့ပါတယ်။ သင်လေ့လာသင်ယူမှုအတွက်အချိန်ဇယားကိုမြဲမြံစေမထားရင်, ကလေ့ကျင့်မထားတဲ့ဆင်ခြေဆင်လက်ရှာတွေ့ဖို့အားလုံးကိုလွန်းလွယ်ကူပါတယ်။
သင်ဒဏ်ခတ်အဖြစ်တိတ်တဆိတ် key ကို၏နာမကိုပြောကအထောက်အကူပြုတွေ့ရပေမည်။ သင့်ရဲ့အမှားတွေကိုသင်နှလုံးဆုံးရှုံးစေခြင်းငှါမခံပါနဲ့, touch နဲ့ typing စလေ့အကျင့်အားဖြင့်လေ့လာသင်ယူနိုင်သည့်ကျွမ်းကျင်မှုဖြစ်ပါတယ်။
သည်းခံပါ။ မှန်ကန်သောလက်ညှိုးထိုး-keystroke ပုံစံများသင်ယူကြသည်နှင့်တပြိုင်နက်, အမြန်နှုန်းနှင့်တိကျမှန်ကန်မှုကိုသဘာဝကျကျပေါ်ပေါက်ပါတယ်။
key တစ်ခုဒဏ်ခတ်ဖို့လိုအပ်မှသာလက်ညှိုးထိုးရွှေ့ပါ။ အခြားလက်ချောင်းကွာသူတို့ရဲ့တာဝန်ပေးအပ်အိမ်အတန်း keys ကိုမှလှည့်လည်ရန်ခွင့်ပြုမထားပါနဲ့။
သင့်ရဲ့လက်ချောင်းအိမ်မှာအတန်း keys တွေကိုဖြစ်သင့်သည်နှင့်သင်၏လက်ကိုကီးဘုတ်ကကဲ့သို့တူညီထောင့်ချိုးမှာ slant သင့်သည်။ သင့်ရဲ့လက်ကောက်ပျင်းဖြစ်လာစေရန်နှင့်စားပွဲဒါမှမဟုတ်ကီးဘုတ်ဆန့်ကျင်ငြိမ်ဝပ်စွာနေတော်မမူပါ။
သော့အပေါ် bang မထားပါနဲ့။ တတ်နိုင်သမျှနည်းနည်းအင်အားကိုအသုံးပြုရန်ကြိုးစားပါ။ သော့ရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှိသမျှဆယ်ခုလက်ချောင်းအနားယူအားဖြင့်စကားများအကြားနည်းနည်းအနားယူပါ။
keys တွေကိုသက်ဝင်မပါဘဲတစ်ဦးကိုလက်ငြိမ်ဝပ်စွာနေစေခြင်းငှါ, ကီးဘုတ်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဘယ်နေရာမှာမဆိုတစ်ပြိုင်နက်ငါးယောက်လုံးလက်ချောင်း drop ။
မတော်တဆမရည်ရွယ်ပဲ keys တွေကိုအသာပုတ်ကိုမစောင့်ရှောက်တာဟာတစ်ကြိမ်မှာလက်ညှိုးနှင့်ပေါ့ပေါ့တန်တန်ပေမယ် crisply ကီးတစ်ခုစီရဲ့သင်္ကေတကိုထိပုတ်ပါ။
Auto-ကျော့စေဖို့, အလိုရှိသော key ပေါ်တွင်တစ်ဦးလက်ညှိုးထိုးမထိထိန်းထားပါ။ Auto-ထပ်ရပ်တန့်ဖို့လက်ညှိုးထိုးကြပါ၏။
သင်တစ်ဦးချင်းစီကသင်ခန်းစာအတွက်အနည်းဆုံးမိနစ် 30 ခွင့်ပြုစေရန်ဆောင်ရွက်ပါ။
သင်တတ်နိုင်သမျှအိမ်မှာရာထူးအဖြစ်အနီးကပ်သင်၏လက်ချောင်းစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်သင်, သင်ယူနေတဲ့အချိန်မှာလက်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကို minimize နေဖို့လိုတယ်။
သင့်ရဲ့လက်ကောက်များရုတ်သိမ်းသင့်လက်ချောင်းများဆင်းပေါက်နှင့်အမြန်ဆုံးနှင့်တိကျမှန်ကန်စွာ keys တွေကိုထိမှန်နိုင်သေချာကူညီလိမ့်မည်။
အနိမ့် / အထက်အမှုအကြားအကူးအပြောင်းမှအစဉ်အမြဲဆန့်ကျင်ဘက်လက်ကိုအသုံးပြုပါ။ မှတ်ချက်: တချို့ Laptop ကို Keyboard ပေါ်မှာစာလုံးပိုမိုနီးကပ်စွာအတူတကွရှိနိုင်ပါသည်။
ကီးဘုတ်ကနေသင့်ရဲ့အကွာအဝေးကိုစစ်ဆေးပါ။ တစ်ဘုံပြဿနာကိုရှောင်ရှားရန်သင့်ကုလားထိုင် Adjust - ကီးဘုတ်မှနီးကပ်လွန်းထိုင်နေသော။ ထင်ရှားတဲ့ minimize လုပ်ဖို့သင့် Monitor ၏ထောင့်ချိုးချိန်ညှိပါ။
ပိုမို. သင်လေ့ကျင့်ခြင်း, ပိုကောင်းတဲ့သင့်ရဲ့ speed ကိုရိုက်ထည့်ပြီးတိုးမြှင့်မည်။
ဖြစ်နိုင်လျှင်ပုံမှန်ကီးဘုတ်နဲ့မ Laptop ကိုကီးဘုတ်ပေါ်မှာလေ့ကျင့်ကြိုးစားပါ။
သင်ကစာရိုက်တဲ့အမြန်နှုန်းကိုစမ်းသပ်စတင်အသုံးမပြုမီသေချာသင်သည်ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာဖြောင့်, သင်တို့၏ခြေကိုပြန့်ပြူးတက်ထိုင်နေကြတယ်စေပါ။ ဖြောင့်သင့်လက်ကောက်, သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နှင့်နီးကပ်စွာသင့်ပါးဆုံကိုသိမ်းဆည်းထားပါနှင့်သင့်လက်ဖျံအဆင့်နှင့်ပုံမှန်အားလပ်ချိန်ယူဖို့သတိရပါ။
လေ့ကျင့်ခန်းလျှော့ပေါ့: ဝေးဆိတ်ကွယ်ရာလက်နှစ်ဖက်စလုံး၏လက်ချောင်းများပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။ အနားယူပြီးတော့, ငါးစက္ကန့်စွဲလမ်းလော့။ သုံးကြိမ်စုစုပေါင်းအဘို့အထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ပါ။
အခါအားလျော်စွာသင့်စာရိုက်မြန်နှုန်းတိုင်းတာရန်သေချာစေပါ - သင်လေ့လာသင်ယူကဲ့သို့အကျွန်ုပ်တို့ tool တစ်ခုအားဖြင့်သင်တို့ကိုအမြန်နှုန်းနှင့်တိကျမှန်ကန်မှုကိုနှစ်ဦးစလုံးအတွက်သင့်ရဲ့တိုးတက်မှုကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။ တစ်မိနစ်လျှင်စကားလုံးများ၏အရေအတွက်ကိုသင့်စာရိုက်အဆင့်ဖော်ပြသည်။
စာရိုက်စမ်းသပ်မှုများအရာနှစ်ခု, အမြန်နှုန်းကိုတိုင်းတာနဲ့အမှား, ဒါကြောင့်သင်တို့သည်ငါတို့၏စာရိုက်မြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှုယူသည့်အခါ, သင့်ရဲ့အမြန်နှုန်းမှာသာမကြည့်ကြပါ။
ကီးဘုတ်လွန်းမြင့်မားနေပါက (ကုလားထိုင်လွန်းနိမ့်) အမှားများကိုထိပ်ကီးဘုတ်တန်းတွင်ပေါ်ပေါက်နေတတ်သည်။ ကီးဘုတ်လွန်းနိမ့်ကျနေပါက (ကုလားထိုင်လွန်းမြင့်မား) အမှားများကိုအောက်ခြေမှာကီးဘုတ်တန်းပေါ်ပေါ်ပေါက်နေတတ်သည်။
သင့်ရဲ့လက်ကိုလက်ကောက်ဝတ် extension ကိုဆင်တူတဲ့အနေအထားတွင်ထားဘူး, ညင်ညင်သာသာတစ်ကျောနဲ့အောက်ဖက်ကိုဦးတည်တိုးချဲ့လက်မမှအခြားတဖက်ကို အသုံးပြု. ဖိအားများနှင့်သက်ဆိုင်: လေ့ကျင့်ခန်းလျှော့ပေါ့။ ငါးစက္ကန့် Hold နှင့်ဖြေလျော့ထားပါ။ လက်နှုန်းနဲ့ဒီသုံးကြိမ်ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ပါ။
၎င်းသည်သင့်အားသင်နေ့တိုင်း 30-60 မိနစ်လေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်တစ်မိနစ်ကို ~ 50 စကားများရဲ့ speed ကိုရောက်ဖို့တစ်ရက်သတ္တပတ်သို့မဟုတ်နှစ်ခုလိုအပ်နိုင်ပါသည်။ သည်းခံပါ။
သင်ပိုမိုလွယ်ကူစာရိုက်ဖြစ်စေလိုလျှင်သင့် Dexter တိုးတက်ကောင်းမွန်သင့်သည်။ သင်ဂီတာသို့မဟုတ်သင့်လက်ကိုလိုအပ်သည်အခြားတူရိယာကစားမယ်ဆိုရင်ဒါဟာကူညီပေးသည်။
လေ့ကျင့်ခန်းလျှော့ပေါ့: အတူတကွလက်ချောင်းများနှင့်အတူပြင်ပသို့နှစ်ခုလုံးလက်နက်ဆန့်နှင့်သင့်ကိုလက်နှင့်အတူစက်ဝိုင်းဆွဲခြင်း, လက်ကောက်ဝတ်မှာသူတို့ကိုလှည့်ကျ။ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ထို့နောက်ငါးနှစ်တစ်ဦးတည်ငါးခုစက်ဝိုင်း။
မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုနှင့်အတူ Chat ။
လေ့ကျင့်ခန်းလျှော့ပေါ့: ဆင်း facing လက်ဝါးနှင့်အတူအပြင်သင့်ရဲ့လက်မောင်းကိုကိုင်ထားပါ။ သင်ရပ်တန့်ရန်တစ်စုံတစ်ဦးကပြောပြခဲ့ကြသကဲ့သို့လက်ကိုတည်ဆောက်မည်ဟု။ ဆန့်ကျင်ဘက်လက်ကိုသုံးပြီးကြီးပြင်းလက်၏စွန်ပလွံဖို့ဖိအားသက်ဆိုင်ပါသည်။ အနားယူပြီးတော့, ငါးစက္ကန့်ဖိအားကိုကိုင်ထားပါ။ လက်ချင်းစီသုံးကြိမ်စုစုပေါင်းအဘို့အထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ပါ။
သင်တို့သည်အစာရှောင်ရိုက်ထည့်ဖို့သင်ယူပါကကီးဘုတ်မှာရှာဖွေနေစဉ်, သင်က screen ပေါ်မှာအမှားတွေကိုမြင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေကြောင့်သင်တို့အခြေအနေများစာရိုက်အစစ်အမှန်လောကသို့ထွက်သွားစဉ်ကစာလုံးပေါင်းအမှားတွေနဲ့သတ်ပုံလေ့ကျင့်ခန်းအတူခက်ခဲသောအချိန်ရှိသည်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။
သင်ရိုက်ထည့်နေစဉ်သင်၏လက်ကိုအုပ်စိုးလက်သုတ်ပဝါ Drape ။
typing စသင်နာကျင်စေတယ်ဆိုရင်, ချက်ချင်းရပ်တန့်ခြင်းနှင့်တစ်ဦးချိုးယူပါ။
သင်ကအလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအတွက်လေ့လာသင်ယူနေတယ်ဆိုရင်, သင့်ရဲ့လေ့လာမှုများမှဆက်ကပ်အပ်နှံရန်နေ့ရက်ကိုတစ်ဆိတ်ငြိမ်အချိန်အဘို့သင့်အလုပ်ရှင်နှင့်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖို့ကြိုးစား - သင့်ရဲ့အလုပ်ရှင်ဖြင့်တိုက်ရိုက်အသစ်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုမှအကျိုးရှိမှာဖြစ်တယ်။
လေ့ကျင့်ခန်းလျှော့ပေါ့: စွန်ပလွံဆင်း facing နဲ့အတူအပြင်သင့်ရဲ့လက်မောင်းကိုကိုင်ထားပါ။ ထိုလက်ကောက်ဝတ်မှာအောက်ဖက်လက်တော်ချထားပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်လက်၏စွန်ပလွံသုံးပြီးကျဆင်းခဲ့လက်၏နောက်ကျောဖို့ဖိအားသက်ဆိုင်ပါသည်။ အနားယူပြီးတော့, ငါးစက္ကန့်ဖိအားကိုကိုင်ထားပါ။ လက်ချင်းစီသုံးကြိမ်ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ပါ။
သုံးရင်ဒဏ်ရာဖွံ့ဖြိုးဆဲသင့်ရဲ့အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်သင့်အားကိုယ်ဟန်အနေအထား, နည်းပညာအလုပ်ရုံကြီးတစ်ခုလုံးကို Set-up အတွက်အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်အတိုင်းလိုက်နာနှင့်ပုံမှန်အားလပ်ချိန်ယူသင့်ပါသည်။
သင့်ရဲ့လက်ကောက်ဝတ်, ပါးဆုံနှင့် keyboard တူညီတဲ့အလျားလိုက်လေယာဉ်ပေါ်နှင့်သင်၏အထက်လက်နက်မှ 90 ဒီဂရီထောင့်ချိုးမှာဖြစ်သင့်သည်။ သင့် screen ၏ထိပ်အနီးမျက်စိအဆင့်ဖြစ်သင့်သည်။
သင်ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့အခါကီးဘုတ်မှာမကြည့်နဲ့။ သူတို့အိမ်မှာအတန်းအမှတ်အသားများအဖြစ်မတွေ့မှီတိုင်အောင်ပဲလှည့်ပတ်သင့်လက်ချောင်းများလျှော။ သော့အပေါ် Hammer မထားပါနဲ့။ တတ်နိုင်သမျှနည်းနည်းအင်အားစုအဖြစ်သုံးပြီးကြိုးစားကြည့်ပါ။
အောင်မြင်မှုနှင့်တိုးတက်မှုသင်သင်ယူမှုပြီးစီးပြီပြီးနောက် touch နဲ့ typing စကပ်ဖို့သင့်ရဲ့ပြဌာန်းခွင့်အပေါ်မူတည်သည်။ ချီတုံချတုံဖွယ်ရှိသောသူတို့အဘို့, သင်ထက်ပိုမိုတိုးမြှင့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကနေရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းသင်ယူမှုအချိန် recover မည်ကိုစဉ်းစားပါ။
သင်တို့သည်လည်းအတူတူ Ctrl နဲ့ Alt + keys တွေနှင့်အတူအဓိကသော့ချက်များကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်လေ့လာသင်ယူသင့်ပါသည် - ဤ keyboard shortcuts တွေကိုသူများအတွက်အလွန်အသုံးဝင်ပါသည်။
သင့်ရဲ့စာရိုက်တဲ့အမြန်နှုန်းကိုတိုးတက်စေရန် '' Speed​​ ကိုစမ်းသပ်မှုများ '' နှင့်ပုံမှန်အလေ့အကျင့်ဆွဲပါ။
မူပိုင်ခွင့် © 2009 - 2022, www.typingstudy.com